“Dadka Mahiga isku sawirayaa saamayn kuma yeelanayaan xidhiidhka Somaliland iyo Q.midoobay” | Somaliland.Org
“Dadka Mahiga isku sawirayaa saamayn kuma yeelanayaan xidhiidhka Somaliland iyo Q.midoobay”
September 27, 2011	Wasiirka Arrimaha dibada oo beeniyay In Mahiga la kulmay kooxaha ka soo horjeeda Somaliland
Hargeysa(Somaliland.Org)- Wasiirka Arrimaha dibada Md. Maxamed Cabdilaahi Cumar, ayaa sheegay inaanu Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Somaliland/Somalia Augustina Mahiga aanu la kulmin kooxaha ka soo horjeeda qadiyada Somaliland.
Wasiirku waxa kale oo uu sheegay in dadka Mahiga isku ag sawirayaa aanay saamayn ku yeelan doonin xidhiidhkii ka dhaxeeyay Somaliland iyo Qarammadda midoobay midna.
“Waan maqlay in warbaahinta Somaliland ay ku soo baxday warar sheegaya in Augustina Mahiga uu shirar gaar ah la galay kooxo ka soo horjeeda madax banaanida Somaliland. Waxaan doonayaa inaan halkan ka caddeeyo inaanay arrintaasi ahayn arrin jirta. Augustina Mahiga waxa uu ka qeyb galay shir ka dhacay dalka Canada waxaanu la kulmay Jaaliyada Somaliland iyo Soomaaliya waxaanu kala hadlayay arrimaha uu u xil saaran yahay arrimaha Somalia iyo Somaliland,”ayuu yidhi Dr. Maxamed Cabdilaahi, oo Saxaafaddu wax ka weydiisay sida uu u arko baaqyo ka soo yeedhay masuuliyiin ka tirsan mucaaridka oo ku baaqay in Mahiga la mamnuuco inuu socdaal ku yimaado Somaliland.
“Khudbadii uu shirkaasi ka soo jeediyay Mahiga waxa uu si qoto dheer qadiyada Somaliland waxaanu ka hadlay dimuqraadiyada iyp Nabadgelyada, waxaanu ka hadlay isbedelkii dalka ka dhacay iyo sidii xukuumadii hore iyo xukuumada cusubi xilka ula kala wareegeen sida amniga ah waxaanu arrintaasi uga hadlay si qiiro leh oo uu ugu hayo Somaliland ixtiraam. Waxaanu Mahiga sheegay in midowgii Somaliland iyo Somalia aanu u shaqayn sidii la rabay,”ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha dibadu.
Wasiirka oo hadalkiisa sii watay wuxuu intaasi ku daray “Waxaan halkan idiinku cadaynayaa inaanu Mahiga la shirin kooxaha ka soo horjeeda qadiyada Somaliland. Qof sita garamada iyo shaadhadhka ee isku sawiraya Mahiga agtiisu ma aha kuwo saamayn ku yeelanaya xidhiidhka ay Somaliland la leedahay qaramada midoobay iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Somaliland/Somalia intaba.”
Previous PostWasiirka Arrimaha Dibada oo ka waramay Natiijada socdaal uu ku tagay MaraykankaNext PostWasiirka Warfaafinta Oo kulan La Yeeshay Shaqaalaha Wasaarada Warfaafinta	Blog